Cunto: Qalabka WordPress Plugin - Talooyin waxtar leh
Faa'iido WordPress ah oo gaar ah wuxuu leeyahay naqshad gaar ah, waxqabad gaar ah iyo sifooyin gaar ah oo si sax ah uula wadaagaya ganacsigaaga. Waxaa jira boqolaal kun oo xayeysiin lacag la'aan ah iyo premium premiums, laakiin plugin WordPress ah ma laha wax kale oo aad adigu edbin karto oo aad kor ugu qaadi karto shaqadooda sida shuruudahaaga iyo rajooyinkaaga. Inkastoo ay adagtahay in macaamiisha internetka laga dhigo, waxaad weli abuuri kartaa plugos WordPress cajiib ah oo kordhiya iibkaaga - cool cat online casino.
Ross Barber, oo ah takhasus sare oo ka mid ah Semt Adeegga Dijital ah, wuxuu diiradda saarayaa xaqiiqda ah in shirkadaha iyo horumariyayaashu ay fahmaan in dadka isticmaala aysan dooneynin inay si weyn u bixiyaan pluginnada WordPress. Taasina waa sababta ugu badnaan ee fiilooyinka ay yihiin kuwo iska caadi ah oo bilaash ah, taas oo macnaheedu yahay inaad si deg deg ah u soo dejisan karto, rakibto oo aad u dhaqaajiso. Horumariyeyaasha webka ee kala duwan iyo injineeriyeyaashu waxay bixiyaan xalal ficillo ah oo ku saabsan dhibaatooyinka la xariira isticmaalka plugin, qiimaha aad ayuu u sarreeyaa. Iyada oo ku saleysan shuruudaha ganacsigaaga, waxaad dooran kartaa furaha bilaashka ah ama qaybaha lacagta lagu bixiyo
Fahmida qiimaha bogsiyada WordPress
Kaliya kasta oo WordPress ah ayaa loo dhisaa macaamiisha shakhsi ahaaneed, kharashyaduna way kala duwan yihiin iyadoo ku xiran inta uu qoray qoraaga si uu u dhiso. Xaqiiqooyinka WordPress waxay ku yimaadaan meel ballaaran, qiimaha ay ku kala duwan yihiin shirkadda ilaa shirkadda..Qiimaha plugin waa ficilka laba waxyaalood oo waaweyn: horumariyaha horumariyay gaar ah iyo wakhtigii uu u qaaday si uu u abuuro oo uu furo fiiladiisa isaga oo aan wax ka tarin tayada. Haddii aad ku cusub tahay WordPress oo aadan waxba ka ogaan kudaha iyo sicirka, waa inaad maskaxda ku haysaa qodobbada soo socda:
1. Weydiiso hareeraha iyo helitaanka qiyaasta kakanaanta WordPress ku xiran:
Ugu horreyntii, waa inaad weydiisaa si aad u hesho qiyaasaha sida shaqooyinka farsamada iyo sida ay u adag yihiin. Si aad u ogaato sida aad u adag tahay farta WordPress WordPress, ma jirto wax bedel ah khabiirada IT. Haddii aad taqaanid wax walba oo ku saabsan horumariyaha oo fikrad ku saabsan inta jeer ee hore loo bilaabay, waxay kuu fududaan doontaa inaad qiyaasto kharashka ama qiimaha plugin. Ujeedadaas, waxaad ku biiri kartaa boggaga rasmiga ah ee WordPress, WordPress subreddits, iyo kooxo WordPress ah online. Weydii su'aalo oo la xiriir dadka waayeelka ah si aad u ogaatid inta ay kharashka kuugu kordhin doonto adiga iyo kuwa ugu fiican ee warshadan.
2. Heerarka ay ku jiraan WordPress plug ah
Waa cadahay in heerka soodhawrka WordPress ku xiran uu kala duwan yahay waxayna ku xiran tahay inta jeer ee dib-u-eegista iyo faallooyinka ay heleen. Guud ahaan, khabiirada WordPress iyo kuwa horumariya ayaa fahamsan in qiimaha aan la mid noqon karin sida plugins kala duwan loola jeedo inay qabato hawlo kala duwan.
3. Akhrinta guud ahaan
Waa inaad isku daydaa inaad fahamto kakanaanta WordPress ee qaaska ah ka hor inta aanad qiyaasin qiimaha. Faa'iidada ugu badan ee miisaanku waa, sareeyaashu waxay noqonaysaa heerarkeeda. Fadhiyada aad ku aragto xisaabtaada WordPress waxay qabataa tirada xaddidan ee shaqooyinka mana haysan waxyaabo fara badan. Haddii aad leedahay bog internet oo xirfad leh ama aad rabto inaad ganacsigaaga kor u qaadato marnaba, waa inaadan marnaba ku tiirsaneeyn khidadaha lacag la'aanta ah oo aad ka doorato lahaanshaha WordPress ee khaaska ah kaasoo kuugu kici doona wax ka yaryahay $ 10 illaa $ 900.